Qoondalloni Motummaa Naannoo Oromiyaa yaaka ummata irati hojjacha ABOtu hojjacha jira jedhe dulla Soba ABO irati bana jira – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQoondalloni Motummaa Naannoo Oromiyaa yaaka ummata irati hojjacha ABOtu hojjacha jira jedhe dulla Soba ABO irati bana jira
Qoondalloni Motummaa Naannoo Oromiyaa yaaka ummata irati hojjacha ABOtu hojjacha jira jedhe dulla Soba ABO irati bana jira
Anii kana ana dhibee Tokko yeroo goocha kun hojjatamu Ummaani hin arkuu lata Akumma Qamooni Motummaa jedhan yoo Goochii kun dhugaa tehe Badii gurugudoo kana OPDO male Ummani Naannoo sani hin arkuu lata ? Inni bira Ammo median Oromoo Kan Akka VOA BBC OMN FI kan kana fkk tani Media partilee siyaasaa hundaa irraa Walabaa tehe malif goochota Soba dhibaa siyaasatiif Godhama jiru Kana malif horddoffe ifa hin gone lata ?
Dr kun Qamaa Mootummaan ukkaafame jira Garuu Yeroo Ergama Isaa Fixee Ba’u Diraamaa akka hin hojjeenne, Ba’ee ABOtu Na qabe jechuu danda’a.
Kanaf Diraamaa kana beeku qabdu.
Qoondalloni Motummaa Naannoo Oromiyaa yaaka ummata irati hojjacha ABOtu hojjacha jira jedhe dulla Soba ABO irati bana jira Yaa Oromoo ijaa Banadhati ofira ilala WBO fi ummata waliti diruf wan hojjatama jiru kan Araa Akka Kaalesa miti Yaa OPDID Soboni Ati ABO maqa xuureesuf Godha jirtu kanu Sii dhabamsisa Dhisii .mee soba kan haa ilalu walin
1~Najjootti barsiisaa Geetaachoo manaa waliin gubanii “ABO tu gube” jedhan. VOA n afaan Oromoo jalaa saaxilee isaanumti akka guban mirkaneesse.
2~Dambidoollootti nadhoo ciniinfattu kan dahaaf gara mana yaalaa deemtu baajaajii gubbaatti rasaasaan ajjeesanii “ABO tu ajjeese” jedhan. Guyyaanuma san koominikeeshiniin naannoo sanii poolisii Oromiyaa tahuu mirkaneesse.
3~Ummata Oromoo gumuz lafarraa buqqisaa jiru “ABO tu buqqise” jedhanii olola bananii jiru. Warroonni buqqa’an immoo “kan nu buqqise waraana gumuz meeshaa ammayyaa qabate malee ABO miti” jedhee dhugaa baase.
4~Manguddoo araaraaf gara lixaa imalan dubbi himaan OPDO “saamaman” jedhee dubbii sobaatiin tiivii isaanirratti dabarse. Sanis BBC n afaan Oromoo jalaa saaxiltee dhugaa baafte.
. Jaal Daawud ibsaa Oromoo miti
. ABO’n tigire waliin hojjeta
. Abbaa torbeetu qaabame
. WBO’n Baankii saame
. Waraanni WBO Ertiraa irraa dhufe 50% tigreedha
. Walitti Bu’iinsa Beenishanguliif wallaagga gidduutti uumamef sababa kan ta’e WBO dha
. Konorlee Gammachuu Ayyaanaa tikraya Dhaqee
1, ONN damee maqaleetti banatee,soba.
3, loltoota Asmaraa dhufan keessa Tigireetu jira,soba. Getaachoo Asaffatu WBO gargaara,soba.
. “Lakkoofsi WBO hidhatee jiru 50-60 ti!” Alamuu Simee
“. Lakkoofsi WBO harka kennatee 179 gahe” Toleeraa Caalaa
. ABON QABENYA UMMATA SAMMA JIRA ABON BANKI MOTUMMAA SAMMA JIRA
1. Geetaachoo Asffaa qabamee Sudaan jira jette, kijiba tahuu Uummanni barraan achumaan bade jette,
2. Waajjirri /Studion ONN Maqaaletti baname jette, qulfiillee harka Debretsion fudhatan jettee kijiba adii kijibde. Garuu yeroo qulfii fudhatanillee nu argisiisuu hin dandeenye.
3. WBO Eretiraa gale keessaa 600 Tigreedha jedhan, ulaagaa kana isaan jechisiisuu danda’es hin ibsine
4. Kolonel Gammachuu Ayyaanaa osoo Finfinnee jiruu Maqaale jira jedhanii soba aduu guyyaa qaanii tokko malee gad naqan
5. WBO fi Wayyanneen waliin nuu waraanaa jiru jedhan, garuu ragaa qabaatama kenna yoo jennun cicc jedhan.
Kijibanii biyya bulchuun gooftolii isaanii Weyyaaneefuu hin tanee. Uummannis amma booda nama isa sossobu osoo hin taane nama haqa itti himu jala buluu barbaada.
Qamooni Motummaa yeroo amma soba fi Olola dhara darbachuu Irra darbee Soba Aada fi Safuu Oromoo
fallisuu baballisu jirtu. Mootummaan MNO Sobu jechuun Uummata Oromoo Sulphisuudha. Amala gadhe OPDON ittiin baroota 28 Tigiree wajjin uummata goyyomsite jiraate dhaloota kana Sobaan akka guddatan gochuudha.
OPDO namoota barumsa Sobaan Digirii qaban malee Digirii Oogumma qaban ramadee (Qaxartee) hin beektu.
Kabineen OPDO Gandaa hanga MNO aatti Sobaan, huumanii haasahun namni isaan dorgomuu hin jiru. Fakkenyaaf kaleesuma OPDON Soba gurguddaa sadii sobde.
1) TIGIREE TOKKO utuu keesa hin jiraatin WBON ardaa’ita jiran tigireedha jedhanii soba adii Sobe Alamuu Sobduun.
Yoo tahees arki tara wal dhiqaa OPDO Tigireef miilla dhiqaa turtee fi jirtii mitii? Oromoo yoo tigiree Ajeeje Oromoof lolsiise ABO uummata Oromoo biraatti jejamu malee hin tuffatamu.
2) Namoota opdo ta’aan waliitti qabanii WBO qabne jechuu.
Jarreen kun namoota baroota dheeraaf opdo of hojetaa turaniidha.
Suuran isaan, Marana qillensa irraatti maqaa bira caqasan.
3)Waa ee ABBA TORBE.. OPDON Calliiste Qeerroo hiriirita adda addaa irraatti fuldura deeman miseensotni fi basaastonni isanii photos isanii qaban arka Funaante Diraama Fi Dokimeenterii Filmii hojechuuf qophii irra jirti.
Hojii fi Olollii OPDO Honda Siyaasaaf jedhanii waan jiruu fi hin jirre xabaxabu.
Gochaan kun hardware Oromoo keesatti hojii fafaadha. kanaaf, hundii keenya fudhachuu dhiisne gocha kana irra akka isheen of qusatuuf mormuu qabna. OPDON SUUFII uffachuu malee dhugaa haasa’u hin beektu.Mee ilala gaa ololii kun hundii isa AKUMMA BARATAN SANITI ADD BILISUMMAA OROMOOTI FI UMMATA OROMOO JIIDUTI MADA, umanii ummata fi dhabaa dudafi gara waliti godhuf akka tehee wan wal nu gaafachisu miti .
BORUS yoo FEETAN BOOMBII MOORAA DUUBA obboo LAMMAA MAGARSAATTI darbadhaatti, ABOn yaalii akkanaa raawwatee jira jechuun DUBBII DHARAA BUKOO SIYAASAA BARATAMAA keesaan saniin TORBAN TOKKOOF MATA DUREE wacaa banaa.
Warra hojii keesan hin beeknef jechuu kooti.
Maqaalee ilmaan Oromoo naannawaa Finfinnee hidhamaa jiranii keessaa hanga muraasa.
Madda : Sagalee Bilisummaa Oromoo
Dhuga dubaachu enyyu iyyuu Namaa hin dhorkuu kutataan gara kan abba jedhe tahu